Sida Loo Sameeyo Dareenka Taleefoonka: Siyaabo Kala Duwan Oo Loo Sameeyo Dareenka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sida loo sameeyo emoticons on Twitch
Nerea Morcillo | 03/05/2022 15:30 | Astaamaha, Khayraadka
Dunida tignoolajiyada aad bay u kala duwan tahay oo hadda waxaan dooran karnaa doorashooyin kala duwan. Maqaalkan, waxaan uga hadli doonaa aalad ama codsi aad moodo u ah dhammaan kuwa u heellan baahinta ama sidoo kale loo yaqaan fiidiyowyada tooska ah ee leh ikhtiyaarka sheekaysiga tooska ah.
Hubaal inaad hore u maqashay iyo in kale, laakiin ma aha oo kaliya awood u leh abuurista fiidiyowyada tooska ah ee internetka, laakiin sidoo kale waxay ka sii gudubtaa wixii aan u maleynaynay.
Sidaa darteed, Waxaan diyaarinay nooc ka mid ah casharrada gaaban halkaas oo aan ku sharxi doono sida loo abuuro emoticons ama emojis sidoo kale loo yaqaan, si loo sameeyo sheekeysiga ama fiidiyowyadaada, hab aad u firfircoon oo is dhexgal ah.
Ma rabno inaan ku sii sugno mar dambe, waanu bilownay.
1 Twitch: waa maxay
1.1 Astaamaha guud
2 Tababarka: sida loo abuuro emojis Twitch
2.1 Tallaabada 1: Samee fayl
2.2 Tallaabada 2: Bilow sawirista
2.3 Tallaabada 3: Keen emoji kaaga nolosha iyo midabka
2.4 Tallaabada 4: Samee taabashooyinka ugu dambeeya
2.5 Tallaabada 5: Dhoofinta emoji-gaaga
2.6 Qeybta 6: U soo rar Twitch
Twitch: waa maxay
Xigasho: 65 iyo in ka badan
Kuwa aan weli garanayn waxa ay madalkani ku saabsan tahay iyo sida ay u shaqeyso, ha ka werwerin sababtoo ah waxaanu samaynay sharraxaad kooban si aanad u doonayn inaad ogaato waxa ay tahay iyo sida hadhow aad awood ugu yeelan karto naqshadaynta emojis-ka.
Twitch waxaa lagu qeexaa sida daawashada ugu muhiimsan ama madal fiidyaha tooska ah ilaa maanta. Aynu nidhaahno waxa loo qaabeeyey iyada oo ujeedadu tahay samaynta muuqaalo toos ah ama baahinta ciyaaraha fiidyaha qaarkood. Sababtan awgeed, waxaa si aad ah u isticmaala youtubers badan oo leh channels halka ay ku ciyaaraan oo ay abuuraan muuqaalkan oo kale.
Ma haysanno hal nooc oo dhagaystayaal ah, maadaama shirkado badan ama machadyo ay isticmaalaan madalkan si ay u baahiyaan fiidiyowyadooda iyo sidan oo kale, qof walba waa la socdaa warkaaga. Waxaan ka hadlaynaa dadka caanka ah (fannaaniinta, heesaaga, ciyaartoyda kubbadda cagta, iwm.)
Xitaa kooxo badan oo kubada cagta ah ama kubbadda koleyga NBA ayaa sidoo kale ku biiray guusha Twitch, taas oo soo jiidatay dareen badan isticmaalayaasha.
Hadda, goobtan caanka ah, waxa uu helaa wadar ahaan 17,5 milyan oo soo booqda maalintii waxayna leedahay dhagaystayaal malaayiin iyo malaayiin booqdayaal ah.
Waxa dad yar ay og yihiin in goobtan ay iibsatay Amazon 2014 sababtaas awgeed, waa sabab wanaagsan oo loogu talagalay in lagu daro xirmada rukunka ee Amazon Prime. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah codsiyadaas u koraan waqti ka dib ilaa miisaanyo waaweynIntaa waxaa dheer, iyada oo la siinayo waxyaabo gaar ah oo gaar ah, waxay ka dhigaysaa mid aad uga sii gaar ah inta kale, taasina waa waxa daawadayaasheeda ay jecel yihiin.
Interface-ka Twitch wuxuu aad ula mid noqon karaa YouTube, gaar ahaan maadaama ay sidoo kale ku jirto ikhtiyaarka lagu sheekeysto inta aad nooshahay. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale booqan kartaa kuwa tooska ah ee isticmaalayaasha aad raacdo, faahfaahinta taas oo macnaheedu yahay inaadan ka maqnaan mid ka mid ah warkooda.
Sida ay sidoo kale yihiin channels, waxaad haysataa ikhtiyaar aad ku rukunto kuwa ugu badan ee dareenkaaga soo wacaya isla markiiba, madalku wuxuu dhigayaa fiidiyowyadeeda aagga ugu weyn ee madal si aad gacanta ugu hayso.
Marka la soo koobo, hab cusub oo madadaalo ah.
Tababarka: sida loo abuuro emojis Twitch
Xigasho: Twitch Blog
Casharkaan, Waxaan isticmaaleynaa qalabka rinjiga istuudiyaha. Waa hab wanaagsan oo lagu sawiro oo loo abuuro vectors iyo sawirro si dhakhso ah oo fudud. Sidan ayaan hadhow ugu dhoofin karnaa PNG ama qaab kasta oo kale oo ansax ah.
Mar alla markii la soo dejiyo oo lagu rakibo qalabkaaga, waxaan u gudubnaa tallaabada ugu horreysa ee aan ku bilaabayno casharrada.
Tallaabada 1: Samee fayl
Xigasho: Tips Studio-ga Clip
Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doono waa abuurista fayl cusub. Si tan loo sameeyo, waa mid aad u fudud, kaliya waa inaan sameynaa Riix astaanta oo ah qaab folio ama warqad ah in aan ku leenahay bar sare, oo kaliya dhanka bidix.
Marka aan riixno astaanta, waa in aan hubinno cabbirada saxda ah, kaas oo aan ku shaqeyneyno oo aan ku shaqeyneyno sawirkeena. Sidan oo kale, waxa saxda ah waxay noqonaysaa in feylku uu yeesho dhinac labajibbaaran ama qaab, kaas oo Emoji kaliya uu ku shaqayn karo.
Marka aan helno tallaabooyinka, waxaan sii wadeynaa inaan wax ka beddelno xallinta, taas oo ah mid caadi ah iyo Waxa saxda ah waxay noqon doontaa in la haysto ilaa 300 dpi. Waxaan hubineynaa in gadaasha sabuuradda farshaxanku ay tahay caddaan oo u gudubta tallaabada labaad.
Tallaabada 2: Bilow sawirista
Marka aan miiskayaga diyaarsano, waxaan sii wadeynaa inaan tijaabino burushyada uu qalabku na siinayo. Si taas loo sameeyo, waxaa habboon in la isticmaalo qalin aan dhumuc lahayn ama dhuuban. Nib 17mm ah ayaa ku habboon in lagu bilaabo, marka lagu daro, waxay sidoo kale noqon doontaa mid xiiso leh in la isticmaalo midab diirran oo aad si fiican u tirisay template bilowga ah, tusaale ahaan orange ama casaan.
Ka hor intaanan sawirin, waxaan abuuri doonaa lakab kaas oo aan ku dhejin doono istaroogga ugu horreeya ee aan samayno. Waxyaabaha xiisaha leh ayaa ah in istaroogyadu aanay sidoo kale aad u dhumucnayn, laakiin ay leeyihiin cabbir caadi ah. Si tan loo sameeyo, waa inaad daraasad horudhac ah ku samaysaa mid kasta oo ka mid ah burushyada la tusay.
Marka aan mar hore dib u eegnay templateka midab madow. Waxaan sii wadi doonaa inaan tirtirno lakabka ka hooseeya mugdiga, taas oo ah, oranji ama casaan u adeegay raadinta. Si tan loo sameeyo, waxaan gujin doonaa astaanta isha ee ku taal midigta lakabka halkaasoo aan ka shaqeynay qaab-dhismeedka.
Tallaabada 3: Keen emoji kaaga nolosha iyo midabka
Xigasho: Talooyinka rinjiga clip
Marka aan haysano qaabka emoji-gayada, waxaan u soconaa inaan siino nolol iyo midabeyn. Si tan loo sameeyo, waa inaad heshaa nooc kale oo burush ah, markan oo leh istaroog qaro weyn si ay u awoodaan inay buuxiyaan garaac kasta oo rinji ah. Haddii aad rabto in aad hesho khad gaar ah, waxaad isticmaali kartaa qalabka eyedropper, Qalabkan waxaad ku qaadan doontaa astaanta midabka saxda ah ee aad rabto oo guji lakabka, waxaad buuxin doontaa qaybta emoji-ga aad jeceshahay.
Tallaabada 4: Samee taabashooyinka ugu dambeeya
Marka aan helno emoji-gayada diyaarsan, waxaan sii wadeynaa inaan hagaajino waxa iftiinka iyo isbarbardhigga noqon lahaa, si habkan, ay tahay mid aad u macquul ah. Si tan loo sameeyo, waxaan abuuri doonaa lakab cusub iyo waxaan gelin doonaa ikhtiyaarka lagu dhufto, marka aan hagaajino lakabka, waa inaan u isticmaalnaa midabka cad ee aagga emoji-keena halkaas oo aan rabno inaan helno iftiin ka badan qaybaha kale.
Samee tan inta jeer ee aad rabto in aad iftiin badan ama iftiin yar ku shubto oo u samee wax la mid ah hadhyada, dhab ahaantii waa isla habka.
Tallaabada 5: Dhoofinta emoji-gaaga
Markaan diyaar u nahay emoji-gayada, waxa ugu horreeya ee aan sameyn doono waa keydin si aadan waxna ugu lumin habka. Tan waxaan aadi doonaa ikhtiyaarka ah faylka waana siin doonnaa badbaadi sida. Waxa ugu fiican uguna badbaado badan waa in la kaydiyo faylka laba jeer, hal mar oo la kordhinayo barnaamijka si aad u awooddo inaad wax ka beddesho emoji mar kasta oo aad rabto, iyo mid kale oo leh kordhinta PNG si aad u awooddo inaad isticmaasho.
Marka aan gujino dhoofinta, waxay noo hagaajin doontaa daaqad halkaas oo aan ku qasbanaan doono in aan habeyno Cabbirrada wax soo saarka, kan ugu fiican waa cabbirka 112 x 112 px. Marka aynu helno cabbirada wax soo saarka iyo kordhinta, waxaanu ku kaydin doonaa gal aan ku samayn doono miiskayaga, si aanu u dhex lumin tirada badan ee faylalkayaga ee aan muhiimka ahayn.
Qeybta 6: U soo rar Twitch
Xigasho: Caawinta Twitch
Si aad emoji ugu dhejiso Twitch waa mid aad u fudud, kaliya waa inaan tagnaa goobta oo aan furno guddiga abuuraha oo sidoo kale loo yaqaano maamulaha. Marka la furo, Waxaan aadi doonaa ikhtiyaarka maamulaha qulqulka kaas oo sidoo kale tilmaamaya marka la soo bandhigo, markaas ayaan aadeynaa doorashooyinka ka dibna si xiriir la leh. Waxaan gujin doonaa ikhtiyaarka niyadda waxaanan kaliya ku qasbanaan doonaa inaan ku shubno faylalkayaga qaabka PNG. Marka la dhejiyo, barnaamijka laftiisa ayaa akhrin doona oo aqbali doona haddii ay sax yihiin.
Sidaad awood u yeelatay inaad xaqiijiso, samaynta emoji iyo ku dhejinta goobta waa mid aad u fudud. Qalabkan waxaad ku heli kartaa habab kala duwan oo aad u qaabayn karto emojis-kaaga. Sidoo kale ogow inaadan isku dayin qaar ka mid ah burushkiisa, maadaama ay aad u xiiso badan yihiin, natiijada kama dambaysta ah waa mid cajiib ah. Waxaad u qaabayn kartaa emojis dhammaan qaababka suurtogalka ah iyo midabada suurtagalka ah, intaa waxaa dheer, hashtag #twitchemotes waxaad heli doontaa kumanaan emojis kuwaas oo aad ku dhiirigelin karto naqshadahaaga oo u oggolow hal-abuurkaagu inuu si duurgal ah u socdo.
Waxaan horey u aragnay in Twitch uu yahay madal ka yaabisay isticmaaleyaasheeda maalin kasta. Waa wax caadi ah in lagu arko fiidiyoowyo la daawado Twitch meelaha kale sida YouTube. Waana in isticmaaleyaal aad iyo aad u badan ay go'aansadaan inay ku biiraan oo ay bilaabaan tacaburkooda kanaal gaar ah oo codsigan ah.
Waxaan rajeyneynaa in casharka uu ku caawiyay si weyn si aad u bilowdo naqshadaha emoji ee kuugu horreeya. Hadda waa wakhtigaaga inaad noqoto fanaanka bisha oo sidaan, u qorshee dhammaan xirfadahaaga faneed.
Nakhshadeynta emojis waligeed may fududayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sida loo sameeyo emoticons on Twitch
xaraf Ingiriisi hore
logos ee baararka